Showing 1-10 of 604 items.
बोक्सीको आरोप लगाउने प्रहरी फन्दामा
सिन्धुली । सिन्धुलीमा बोक्सीको आरोप लगाउँदै दुर्व्यवहार गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दुधौली नगरपालिका १० का नारायण कार्की रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता ...
पर्सामा लागू औषधसहित युवक पक्राउ
काठमाडौं । लागू औषधसहित पर्सामा एक जना युवक पक्राउ परेका छन् । ६०० एम्पुल इन्जेक्सनसहित पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-३४ रामगढवाका २६ वर्षीय अफरोज मियाँ अन्सारी पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको ...
चोरीका गाडी बिक्री गर्ने गिरोह सक्रिय, सैनिक जवानसहित चारजना पक्राउ
काठमाडौं । भारतबाट सवारी साधन चोरी गरी काठमाडौंमा बिक्री गरेको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेपाली सेनाका जवान पनि छन्। चोरीका गाडी बिक्री भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट ...
टिकटकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आपत्तिजनक भिडियो बनाएको आरोपमा एक पक्राउ
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आपत्तिजनक भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले मेचीनगर–६, बर्मेलीबाट ३५ वर्षीय सोमप्रसाद ...
पैसा लिएर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउने वडा सदस्यसहित ७ जना पक्राउ
रोल्पा । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटना गाउँमै मिलाएको आरोपमा रोल्पामा एक जना वडा सदस्यसहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आफ्नै जेठाजुबाट बुहारी बलात्कार भएको घटना गाउँमै मिलाएको आरोपमा लुंग्री गाउँपालिका वडा नं. ४ क ...
लागुऔषध कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरी जवानसहित ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौंबाट अवैध लागुऔषध र नक्कली सुनसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका १६ पकनाजोलस्थित होटलमा लागु औ ...
घुस दिन खोजेको आरोपमा मदिरा कारोबारी पक्राउ
काठमाडाैं । घुस दिन खोजेको आरोपमा प्रहरीले मदिरा कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीलाई २५ हजार घुस रकम अफर गरेपछि उदयपुरस्थित त्रियुगा नगरपालिका ११ बस्ने टिकाबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर ...
पाँच किलो सात सय ग्राम अफिमसहित मकवानपुरबाट एक पक्राउ
प्रहरीले मकवानपुरबाट पाँच किलो ७ सय ग्राम अफिमसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागुऔषध ब्युरो काठमाडौंको टोलीले सोमबार मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका-५ का ४४ वर्षीय रत्न भुलनलाई पक्राउ गरेको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिका-२ संग ...
बुटवल पुर्याउने भन्दै बाटोमा ४ दिनसम्म बलात्कार
रुकुम घर भएकी १९ वर्षीया महिलालाई बुटवल पुर्याइदिने भन्दै ट्रक चालक र सहचालकहरूले पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेका छन् । असार २७ गते बुटवल जान हिँडेकी महिलालाई कलंकीमा बिहान ना५ख २८७० नम्बरको ट्रकका चालक वीरगञ्ज महानगरपालिका&ndas ...
सिरहामा औषधि व्यवसायीमाथि गोली प्रहार घटनाका ३ अभियुक्त जेल चलान
सिरहा । सिरहा मिर्चैयाका औषधि व्यवसायीमाथि गोली प्रहार घटनाका आरोपित तीन जना अभियुक्त पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत सिरहाले घटनाका अभियुक्त मिर्चैया-६ का ४२ वर्षीय सूर्यदेव साफी, उनका छोरा २३ वर्षीय रो ...